Kristy, faran'ny lalàna | Fiangonan'Andriamanitra an'izao tontolo izao Suisse - Fiangonan'Andriamanitra andriamanitra Suisse
Isaky ny namaky ny taratasy nosoratan'ny Apôstôly Paoly aho dia hitako fa nanambara tamim-pahasahiana ny marina izay notanterahin'Andriamanitra tamin'ny fahaterahana, fiainana, fahafatesana, fitsanganana amin'ny maty ary fiakaran'i Jesosy. Tao amin'ny taratasy maro hafa, dia nandany fotoana tsara nampihavanany tamin'Andriamanitra ireo olona tsy afaka natoky an'i Jesosy i Paoly satria nifototra tamin'ny lalàna ny fanantenany. Zava-dehibe ny manamarika fa ny lalàna nomen'Andriamanitra ny Isiraely dia vetivety. Natao vetivety io ary natao maharitra mandra-piavin'i Kristy.
Ho an'ny Isiraely, ny lalàna dia mpampianatra izay nampianatra azy ireo momba ny ota sy ny fahamarinana ary ny mila mpamonjy. Nentin'izy ireo izany mandra-pahatongan'ny Mesia nampanantenaina, izay hitahian'Andriamanitra ny firenena rehetra. Saingy ny lalàna dia tsy nanome ny rariny sy ny famonjena ny Isiraely. Afaka niteny tamin'izy ireo fa meloka izy ireo ka mila mpamonjy.
Ho an'ny Fiangonana Kristiana, ny lalàna, toy ny Testamenta Taloha manontolo, dia mampianatra antsika hoe Andriamanitra. Izany dia mampianatra antsika koa ny fomba namoronan'Andriamanitra ny olona izay hanaovan'ny Mpanavotra hanaisotra ny fahotany - tsy avy amin'ny vahoakan'Andriamanitra ihany, fa ny fahotan'izao tontolo izao koa.
Tsy natao akory ny lalàna ho fanoloana ny fifandraisana amin'Andriamanitra, fa fomba entina hitarihana ny Isiraely ho Mpanavotra azy. Nanoratra toy izao i Paoly ao amin'ny Galatiana 3,19: “Ahoana ary ny lalàna? Nampiana noho ny ota izany mandra-pahatongan'ny taranany nampanantenaina. ”
Raha lazaina amin'ny teny hafa, manana fiandohana sy fotoam-piandohana ho an'ny lalàna Andriamanitra, ary ny farany fiafarana dia ny fahafatesana sy fitsanganan'i Jesosy Kristy Ilay Mpanavotra sy Mpanavotra.
Nanohy ny andininy 21-26 i Paoly hoe: “Ahoana? Ka moa ny lalàna manohitra ny fampanantenan'Andriamanitra? Lavitra izany! Satria raha nisy lalàna izay mitondra fiainana, ny fahamarinana dia avy amin'ny lalàna ihany. Fa ny Soratra Masina dia nampiditra ny zava-drehetra teo ambanin'ny ota mba homena ireo mino. Saingy talohan'ny nahatongavan'ny finoana, dia nitazona antsika ambanin'ny lalàna isika ary voahidy amin'ny finoana izay hampisehoana. Ka ny lalàna no namaizantsika an'i Kristy, mba hohamarinina amin'ny finoana isika. Fa rehefa tonga ny finoana dia tsy eo ambanin'ny fifehezana intsony isika. Satria zanak'Andriamanitra daholo ianareo amin'ny alàlan'ny finoana an'Andriamanitra ao amin'i Kristy Jesosy. "
Talohan'ny nanokafan'Andriamanitra ny masony amin'ity fahalalana ity, dia tsy mbola nahita izay niandohan'ny lalàna i Paoly - mankany amin'ny Andriamanitra be fitiavana sy mamindra fo ary mamela heloka izay hamonjy antsika amin'ny fahotana nambaran'ny lalàna. Fa kosa, nahita ny lalàna ho toy ny faran'izy io izy, ary nifarana tamin'ny fivavahana tsy misy dikany ary tsy misy dikany ary manimba.
"Ary toy izany no nahitana fa ny didy dia nahafaty ahy izay mbola nomena fiainana," hoy izy nanoratra ao amin'ny Romana 7,10:24, ary tao amin'ny andininy faha dia nametraka ny fanontaniana hoe: "lehilahy tsy fadiranovana! Iza no hanafaka ahy amin'ity vatana mety maty ity? ”Ny valiny hitany dia avy amin'ny fahasoavan'Andriamanitra irery ihany ary afaka hiaina amin'ny alalan'ny finoana an'i Jesosy Kristy ihany.
Amin'izany rehetra izany dia hitantsika fa ny lalan'ny fahamarinana dia tsy avy amin'ny lalàna, izay tsy mahavery ny helokay. Ny lalan-tokana mankany amin'ny fahamarinana dia ny finoana an'i Jesosy, izay ahazoantsika heloka ny fahotantsika rehetra, ary ao no ampihavanina antsika amin'ilay Andriamanitra mahatoky izay tia antsika tsy misy fepetra ary tsy hamela antsika handeha mihitsy.